रामेछाप कप भलीबलको ब्रान्ड बन्दैछ ः कार्की | KhelkudNews.com
रामेछाप कप भलीबलको ब्रान्ड बन्दैछ ः कार्की
Published on February 5, 2018, by Manoj Shiama - Posted in Slideshow, Volleyball 0
रामेछाप जिल्ला खेलकुद विकास समितीको पछिल्ला बर्षहरुमा निकै बढ्दो छ । पुरुषोत्तम कडेरिया अध्यक्ष भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितीका हरेक ब्यक्तिको सक्रियता उस्तै छ । यस क्रममा रामेछाप पछिल्ला बर्षहरुमा भलीबल प्रतियोगिताको आयोजकको रुपमा अत्यन्त सक्रिय रह््यो । रामेछापमा जारी तेश्रोे राष्ट्रिय भलीबल प्रतियोगिताका संयोजक भलीबलकर्मी तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितीका सदस्य सिताराम कार्की रहेका छन् । तीनै कार्कीसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ः
जिल्ला खेलकदु विकास समितीले भलीबल नै रोज्नुको कारण के हो ?
रामेछाप पहाडी जिल्ला हो । नेपालको पहाडी जिल्लामा भलीबल सबैभन्दा लोकप्रीय खेल हो । यसैलोकप्रीयता यो प्रतिययोगिता आयोजनाको मुख्य कारण हो । तर, हामीले अन्य खेल पनि आयोजना गर्ने गरेका छौ । तर, यसको मतलब हामीले अन्य प्रतियोगिता नगरेका होइनौ । चेस मार्सल आर्ट लगायत अन्य प्रतियोगिता पनि आयोजना नगरेका होइनौ । तर, यसको भलीबलमा राष्ट्रिय स्तरका धेरै खेलाडी समाबेश भएका कारण यसको महत्व बढेको हो ।
यो प्रतियोगिता तेश्रो सस्करण आइपुग्दा यसबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?
म सन्तुष्ट छु । नेपालको पुरुष भलीबलमा रामेछाप एउटा ब्रान्ड हुदै छ । तेश्रो सस्करणसम्म आइपुग्दा पाचँवटै क्षेत्रीय टोलीको सहभागिता रह््यो । हामीले पुरस्कार राशी पनि बढाउदै लगेका छौ । प्रत्येक सस्करणमा यो प्रतियोगिता अझ भब्य र ब्यबश्थित बन्दै छ । स्थानीय निकाय लगायत सिंगो रामेछाप जिल्लाबासीको यसमा चासो बढ्दै गएको छ । मलाई लाग्छ नेपालको भलीबलमा रामेछाप कप एउटा ब्रान्डको रुपमा स्थापीत भइसक्यो । यसमा हामी सन्तुष्ट छौ ।
प्रतियोगिताको आगामी सस्करण यो भन्दा ब्यापक हुन्छकी यस्तै नै रहन्छ ?
हामीले प्रत्येक सस्करणमा पुरस्कार राशीमा बृद्धी ग¥यौ । यसले गर्दा रामेछापकै टोलीमा पनि राष्ट्रिय स्तरका नाम चलेका खेलाडी समाबेश भए । भलीबलमा चासो राख्ने सबैका लागि रामेछापका क्लबहरु चिनिए । अर्को सस्करणमा यो प्रतियोगिताको क्षेत्र अझ फराकिलो हुने छ । रामेछाप सिभिल कप देशभरीका स्टार भलीबल खेलाडीको प्रतिक्षाको विषय बन्ने छ ।